Iindaba - Umbutho wase China wentsimbi kunye nentsimbi: Lungisa ubume beemveliso ezithunyelwa ngaphandle kwaye ucokise ukurhweba kwamanye amazwe kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kweemveliso zentsimbi yelizwe lam.
Umbutho wase China wentsimbi kunye nentsimbi: Lungisa ubume beemveliso ezithunyelwa ngaphandle kwaye ucokise ukurhweba kwamanye amazwe kunye nokuthunyelwa kwamanye amazwe kweemveliso zentsimbi yelizwe lam
Ukwenza umdlalo ongcono wokusebenzela ishishini lesinyithi kunye neenkampani ezingamalungu oMbutho osebenzayo, kunye nokunceda ukutshintsha komzi mveliso kunye nokuphucula kunye nomgangatho ophezulu, ngoMeyi we-19, i-China Iron and Steel Industry Association Market kunye neNdibano yesine yelungu leKomiti yoLungelelaniso nokuThumela kumazwe angaphandle ibibanjelwe eShanghai.
Iinkokheli ezifanelekileyo ezivela kwiZiko loNyango loRhwebo loMphathiswa Wezorhwebo bezimase le ntlanganiso. Amashishini emveliso yentsimbi kunye nentsimbi anje ngeBaowu, Anshan Iron kunye nentsimbi, Shagang, Shougang, Hegang, Benxi Iron kunye nentsimbi, iBaotou Iron kunye nentsimbi, iJapan Steel, iYonggang kunye namanye amashishini emveliso yentsimbi kunye nentsimbi ayephethe ukuthengisa kunye nokuthengisa ngaphandle kunye intsimbi ekhethekileyo kunye neminye imibutho yomzi mveliso. Bangaphezu kwama-70 abameli abezayo entlanganisweni.
Umlawuli Jikelele weBaosteel uSheng Genghong wenze intetho eyamkelekileyo. Ucacisile ukuba umhlaba namhlanje uphantsi kotshintsho olukhulu olungabonakaliyo kwinkulungwane. Umzi mveliso wentsimbi unamathuba kunye nemiceli mngeni. Kuluxanduva kumzi mveliso wentsimbi ukuqonda isigaba esitsha sophuhliso, ukumilisela iikhonsepthi zophuhliso olutsha, ukwakha ipateni entsha yophuhliso, kunye nokugcina ukusebenza ngokutyibilikayo kwityathanga lezemveliso.
Intlanganiso ivotile yapasisa "iMigaqo eSebenzayo yeChina Iron and Steel Association Market kunye neKomiti yokuLungelelanisa nokuThumela nokuThumela ngaphandle", kunye namalungu anyuliweyo weseshoni yesine yeKomiti yoLungelelwaniso lweNtengiso kunye nokuThengisa nokuThumela ngaphandle, kubandakanya usihlalo, amasekela balawuli, nonobhala olawulayo. . USheng Genghong, umphathi jikelele weBaosteel Co., Ltd. weBaowu Group, wonyulwa njengosihlalo weNtengiso kunye neKomiti yokuNxibelelanisa nokuThengisa nokuThumela ngaphandle.
U-Sheng Genghong wenze ingxelo yomsebenzi egameni lekomiti, uphonononge kwaye washwankathela owona msebenzi uphambili kunye nempumelelo yekomiti edlulileyo, kwaye wahlalutya imeko yangoku kunye neengxaki ezikhoyo zentengiso yokungenisa kunye nokuthumela ngaphandle. Ucacisile ukuba ikomiti esebenzayo kufuneka idlale indima epheleleyo kwindima yeenkampani ezingamalungu kwinyathelo elilandelayo, yomeleze utshintshiselwano nokwabelana ngolwazi olubanzi lwezemveliso njengemigaqo-nkqubo yezorhwebo kunye neendlela, ukuphucula amandla okusebenzela amalungu, kwaye kwangexesha kubonise iimfuno iinkampani ezingamalungu; ukunceda iinkampani ezingamalungu ukulungisa ulwakhiwo lweemveliso ezithunyelwa ngaphandle kunye nokomeleza imarike. Ukhuphiswano; Ukubonelela ngenkxaso yeenkampani ezingamalungu ukuze zilungiselele ubeko lworhwebo lwangaphandle kwaye zilungelelanise iindlela zokuthengisa ngexesha elifanelekileyo Ukuphendula ngenkuthalo kwinyathelo "leBelt kunye neNdlela" kwaye ulisebenzise kakuhle ithuba lokutyikitywa kunye nokuqalisa ukusebenza kwesiVumelwano se-RCEP "ukuphuhlisa ngokuqhubekayo iimarike ezisakhulayo; ngokudibeneyo kugcinwe iMarike esempilweni nocwangco kunye nemidla yeenkampani ezingamalungu.
U-Luo Tiejun, usekela-sihlalo we-Iron and Steel Association, uzimase le ntlanganiso. Kwintetho yakhe, uvuyisene nabalawuli abatsha abonyuliweyo, amasekela balawuli kunye nonobhala olawulayo wekomiti esebenzayo, waqinisekisa impumelelo yomsebenzi wekomiti. Ucacise ukuba iikomiti zobungcali zinokunceda ukuvala ubudlelwane phakathi kwamashishini kunye nemibutho, kwaye zincedise ekufumaneni nasekusombululeni iingxaki zamashishini ngexesha elifanelekileyo. Inemigaqo esisiseko yokuxhomekeka kumashishini, ukuxhomekeka kumalungu, nakumashishini okuqhuba imibutho. Yinkonzo engcono yombutho kumalungu, Kwishishini leenkonzo, indima ebalulekileyo yombutho njengebhulorho kunye nekhonkco phakathi kukarhulumente namalungu akhe inokudlalwa ngcono.
U-Luo Tiejun ugxininise ukuba ngokwandiswa kwesikali semveliso yentsimbi kunye nevolumu yeshishini, izithintelo zoovimba kunye noxinzelelo lwendalo ziye zanda ngakumbi ukwenza iingxaki ezinkulu kuphuhliso lwentsimbi lwase China, kwaye zinempembelelo enkulu kubungakanani, iindidi kunye nolwakhiwo lweentsimbi ezingeniswa ngaphakathi kunye nokuthumela ngaphandle. iimpembelelo. Ukujongana nemeko entsha ngokunyuka kweemfuno zentengiso, izithintelo kwizixhobo kunye nokusingqongileyo, kunye neemfuno zophuhliso lohlaza, umsebenzi wekomiti unendlela ende ekufuneka eyihambile kwaye ugcwele imiceli mngeni emitsha. Kwinyathelo elilandelayo lekomiti yomsebenzi, wabeka phambili iimfuno ezithile: okokuqala, iinkampani ezinkulu kufuneka zidlale indima ekhokelayo, zithathe amanyathelo afanelekileyo, kwaye zidlale indima yekomiti ngokufanelekileyo; okwesibini, ukomeleza ukuziqeqesha, nokuthobela imithetho nemigaqo yokukhuthaza uzinzo kwezentengiso kunye nempilo; Okwesithathu, uyilo ngokubanzi. Yenza ulwahlulo lwezinto zerhafu kwaye ukhuthaze ukuthunyelwa ngaphandle kweemveliso ezinexabiso eliphezulu; Okwesine, nikela ingqalelo kwinkqubela phambili ye-EU "yendlela yokulungelelanisa umda wekhabhoni", kwaye ufunde ngefuthe lerhafu yekhabhoni kwangethuba; okwesihlanu, uphathe ubudlelwane phakathi kwamayeza orhwebo kwaye uphucule ukhuphiswano lwendibaniselwano, kwaye ukhuthaze urhwebo lwangaphandle lwentsimbi Uphuhliso lomgangatho ophezulu.
Kwintlanganiso ekhethekileyo elandelayo, uSekela-Khomishinala u-Lu Jiang we-Ofisi yoNyango lwezoRhwebo kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezorhwebo, u-Hu Wei, umphandi wenqanaba lesibini le-International Department of the Commerce, kunye no-Jiang Li, umhlalutyi oyintloko we Iron and Steel. Umbutho, ngokulandelelana uxoxe ngemeko yonke kunye nezindululo zomsebenzi ezijongene nomsebenzi wam wezorhwebo, kunye ne-RCEP Yazisa kwaye yahlalutya amathuba amatsha eshishini lase China, imbonakalo yentengiso yentsimbi yehlabathi, kunye nefuthe kuthengiso lwentsimbi kunye nokuthunyelwa kwangaphandle e China.
Kwingqungquthela ebibanjelwe emva kwemini, abathathi-nxaxheba baxoxe kwaye batshintshiselana ngezimvo malunga nefuthe kunye nokuphendula kokupheliswa kwemigaqo-nkqubo yesaphulelo serhafu yokuthumela ngaphandle, imeko yokuthumela impahla ngaphandle kwentsimbi kunye nethemba lokuthengisa kumazwe aphesheya, kunye namava kunye neengcebiso zokujongana neefrictions zorhwebo. Abathathi-nxaxheba bavumile ukuba ukuhlelwa kwezinto zerhafu ngumsebenzi obalulekileyo kwaye ufikelela kude. Kuyimfuneko ukuphonononga ngokubanzi imeko yokuthumela kwelinye ilizwe kwiimveliso zentsimbi ephezulu, thelekisa izinto zerhafu zokucwangciswa kweemveliso zentsimbi kumazwe ahambele phambili, kwaye ngendlela ecetywayo yenze isindululo sokucokisa ilizwe lam ngokubhekisele kwiimpawu ezibonakalayo kunye nokwenziwa kwemichiza kweemveliso. Isicwangciso semirhumo yokungenisa nokuthumela kwelinye ilizwe yentsimbi kunye neemveliso zentsimbi, kwaye kwesi sizathu, senza izindululo kumasebe karhulumente afanelekileyo. Abathathi-nxaxheba babeka ithemba kunye neengcebiso ngomsebenzi wexesha elizayo wekomiti kunye nombutho.